शिक्षक तथा कर्मचारीको पदोन्नति श्रेणीमा कि तहमा ? शिक्षा आयोगमा छलफल | EduKhabar
शिक्षक तथा कर्मचारीको पदोन्नति श्रेणीमा कि तहमा ? शिक्षा आयोगमा छलफल
काठमाडौं - सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पदोन्नति श्रेणीमा हुने कि तहमा हुने भन्ने बारेमा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगमा छलफल भएको छ । बुधबार बसेको आयोगको दोश्रो बैठकमा उक्त विषयमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्केको छैन । सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर उक्त प्रश्नको उत्तर खोज्ने बैठकले तय गरेको छ ।
शिक्षक र कर्मचारीको पेशागत उन्नयनको जिम्मेवार को हुने भन्ने बारेमा पनि उक्त अवसरमा चर्चा भएको छ ।
पेशागत उन्नयनको जिम्मेवार शिक्षक कर्मचारी आफैँ, स्थानीय सरकार, तिनकै संगठन, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, नजिकका कलेजहरू, शिक्षक सेवा आयोग, स्वतन्त्र निकाय, अरू कुनै हुने भन्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । तिनको अन्तर प्रदेश सरुवा, बढुवा बारेमा के गर्ने ? तथा बाल विकास कार्यक्रमका शिक्षकहरूको सेवा सुविधा तथा पद सोपान के हुने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर समेत खोज्ने बारेमा बैठकमा छलफल भएको छ ।
आयोगको माघ १९ गते सकिने अवधि अघि यी सबै प्रश्नको उत्तर खोजेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने बैठकमा निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको दोश्रो बैठक : ताली, गाली र गुनासो बारे चर्चा !
प्रकाशित मिति २०७४ पौष २६ ,बुधबार
Amrit Subedi9 months ago
निश्चित याेग्यताकाे अाधार तयार गरि श्रेणी हैन तहनै बढुवा गर्दा राम्राे हुन्छ कि।
नारायण प्रसाद सुबेदी9 months ago
शिक्षकको बढुवा तहगत रुपमै हुनुपर्दछ ।यसो गर्दा योग्यताको सहि प्रयोग हुन सक्छ साथै प्रतिस्पर्दा बढ्न सक्छ ।
ratan bdr bhandari9 months ago
शिक्षककाे बढुवा तहगत रुपमा नै हुनु पर्दछ नभए एउटै देशका विभिन्न कर्मचारीविच असमानता हुन्छ
Madan kr karn9 months ago
taha anusar garnuparxa.psc ra tsc equall hunuparxa.
krishna thapa9 months ago
शिक्षक बढुवा तहगत हुनु पर्छ।सरुवा शिक्षक सरुवलाइ अन्तर्प्रादेशिक पनि सहज बनाइनु पर्छ।
Gopal Rai9 months ago
बढुवा गर्दा प्रत्येक तहका विषयगत रुपमा गरिएको भए समता हुने थियो । अहिलेको बढुवा प्रक्रियाले सवै शिक्षकहरुको बढुवा हुने सम्भाव्यता समान देखिदैन । जस्तै ः गणितका शिक्षक र सामाजिकका शिक्षकको बढुवा हुने प्रक्रिया एउटै छ तर सिकाई उपलब्धि गणितमा भन्दा सामाजिकमा धेरै हुन्छ । तसर्थ गणितका निश्चित कोटा भित्र गणितका शिक्षक र सामाजिकको कोटामा सामाजिकका मात्र शिक्षकहरुबीच प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको अवस्थामा समता हुने थियोे ।
Parsing Rai9 months ago
शिक्षकहरुकाे पद्दाेनति तहगत हुनुपर्दछ ।